အိမ်မှာကိုယ်တိုင် Wiper တွေကို ဘယ်လိုမျိူး ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးပေးလို့ ရမလဲ?
မိုးရာသီ ရောက်တာနဲ့ ပထမဆုံး သတိရ မိတဲ့ ကားတစ်စီး ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေး က ဘာပါလိမ့် ။ တခါတလေ မှာ တစ်ချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေ က အရေးမကြီးသလို နဲ့ အရေးကြီး နေတတ်ပါတယ်။ မိုးရာသီ ရောက်မှ အရေးကြီးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နေ့စဉ်သွားလာ စီးနှင်းနေသ၍ အရေးကြီးပြီး ကားတစ်စီး မှာ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာဟာ ကားရှေ့မှန်နဲ့ နောက်မှန်မှာရှိတဲ့ Wiper တွေပါ။ ဒီတခါမှာ Wiper တွေကို ဘာလို့ ဂရုစိုက်သင့်လဲ၊ အိမ်မှာကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုမျိူး ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးပေးလို့ ရမလဲ၊ ဘယ်အချိန်အသစ်လဲလှယ် ပေးရမလဲ ဆိုတာ ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
Wiper တွေကို ဘာလို့ ဂရုစိုက်သင့် လဲ?
ကားမောင်းနှင် နေချိန်မှာ ကားမောင်းသူအတွက် အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုက ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ မြင်ကွင်း ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Wiper စနစ် ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်ချက်က ကားရှေ့လေကာမှန် နှင့် ကားနောက်မှန် တို့ပေါ်မှာ တင်ရှိနေတတ်တဲ့ ရေစက်များ၊ ဖုန် နှင့် အခြားအညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး မြင်ကွင်းကို ရှင်းလင်းစေရန် ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လို မြင်ကွင်းကြည်လင်စေဖို့ Wiper တွေရဲ့ ပူပေါင်းလုပ်ဆောင်ပေးမှု့ ကလည်း အရေးပါ ပါတယ်။ ဥပမာ ကားမောင်းနှင်နေချိန် မိုးအရမ်းရွာသွန်း လာမယ် ဆိုရင် ကားမောင်းသူအတွက် မိမိကား ရဲ့ မြင်ကွင်း ကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ဖို့ Wiper တွေသာ ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Wiper ကို ဘယ်လိုမျိူး ထိန်းသိမ်း စစ်ဆေးပေး ရမလဲ?
1. Wiper လက်တံများကို စစ်ဆေး ပါ။
ပထမဆုံး Wiper လက်တံများကို တင်းကျပ်စွာ ရှိမရှိ စစ်ဆေးရပါမယ်။ Wiper လက်တံများ တင်းကျပ်နေမှ သာ Wiper Blades က ချောင်ထွက်မနေဘဲ ကားရှေ့မျက်နှာပြင် ကို လွယ်ကူစွာ သန့်ရှင်းအောင်ပြု လုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2. Wiper Blades ကို ချိန်ညှိပါ။
Wipers တွေဟာတင်းကျပ်နေတာတောင်ကားရှေ့မှန်မှာ အညစ်အကြေးတွေ ကျန်နေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ ၊ Wiper Blades ကိုလည်း ချိန်ညှိပေးဖို့လိုပါမယ်။ Wiper Blades ဟာ ကားမှန်မျက်နှာပြင်နဲ့ အပြည့်အဝ ထိတွေ့နေရပါမယ်။ ဒါမှ Wiper Blades လည်ပတ်တဲ့အခါ ကားမှန်မျက်နှာပြင်ဧရိယာများ ကို များများသန့်ရှင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Wiper Blades များကို သန့်စင်ပေးပါ။
Wiper Blades များကို ကီလိုမီတာ ၁၀,၀၀၀ သို့မဟုတ် ၆လ တစ်ခါ သန့်စင်ပေး ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သန့်စင်ပေးတဲ့ အခါမှာ အဝတ်စကို ရှာလကာရည်လေးနဲနဲစွတ်ပေးပြီး Wiper Blades အပေါ်ကနေအောက်အထိ သေချာစွာ သန့်စင်ပေးရပါမယ်။ Wipers မှာ ရာဘာသားများ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတာကြောင့် အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ အသုံးမပြုဘဲထားတဲ့ အခါ ရာဘာသားများ ပျက်စီးယိုယွင်းလာနိုင်ပါတယ်။ရေသုတ်စွမ်းအားကို ကျဆင်းစေနိုင်တာကြောင့် ကားမြင်ကွင်းကို လျော့နည်းလာစေပြီး မှန်မှာအစင်းရာများ ဖြစ်ပေါ်လာကာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ အသံများထွက် ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်Wiper Blades ပေါ်က ရာဘာသားများကို rubber protectant OR petroleum jelly တစ်မျိုးမျိုးကို အဝတ်စထဲနဲနဲထည့်ပြီး သန့်စင်ထားတဲ့ Wiper Blades ပေါ် ဖြေးဖြေး ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ ဒါဟာ ရာဘာသားကိုသန့်စင်စေပြီး ပျက်စီးမှူ့ကနေကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကားမှန်မျက်နှာပြင်များ ခြောက်သွေ့နေတဲ့အချိန် ဝိုက်ပါစနစ်ကို အသုံးပြုတော့မယ် ဆိုရင် ကားမှန်ကို စိုစွတ်အောင် အရင်ဆုံး ပြုလုပ်ပြီးမှသာ အသုံးပြုရန် သင့်ပါတယ်။
Wiper တွေကိုဘယ်အချိန်အသစ်လဲလှယ် ပေးရမလဲ?
Wiper လက်တံတွေနဲ့ Wiper Blades က ရာဘာသားတွေ မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကားရဲ့ Wiper ကိုအသစ် လဲလှယ်သင့်ပါတယ်။ Wiper မှာ Expiry Date တော့မရှိပါဘူး။ မသုံးရသေးတဲ့ Wiper ကို အသစ်အတိုင်းသိမ်းထားတယ်ဆို အကြာကြီးခံပါတယ်။ ကားမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Wiper တွေဟာ ရာဘာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာမို့ ရာသီဥတု၊ အပူချိန်၊ နေရောင်ခြည်၊ UV rays တွေနဲ့ထိတွေ့ပြီး ပျက်စီးယို့ယွင်းပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမြဲအသုံးများတဲ့ကားတွေအတွက်ဆို ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ တစ်နှစ်တစ်ခါလောက် အသစ်လဲပေးသင့်ပါတယ်။ အသုံးမများပေမဲ့နေပူထဲမှာ အမြဲရပ်ထားတဲ့ကားဆိုရင်တော့ Wiper Blades ကရာဘာလေးတွေကို စစ်ဆေးကြည့်ပြီး ရာဘာသားမကောင်းရင်တော့ လဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်။